Tsvaga mhando dzekushanya kuSpain | Kufamba Nhau
Mhando dzekushanya kuSpain
Kana tichifunga nezvekushanya, hatifunge kuti kune mhando dzakasiyana, nekuti havazi vese vanofamba nezvikonzero zvakafanana. Muchokwadi kune matunhu ane mhando chaiyo yekushanya izvo zvavanotarisa pazviri kuti vawane zvakawanda kubva munharaunda yavo Ndosaka tiri kuenda kunoona mhando dzekushanya dzatinogona kuwana kuSpain.
Spain hapana mubvunzo nyika yekushanya, iyo inokwezva zviuru zvevanhu gore rega rega vanoda kunakidzwa nezvinhu zvakasiyana, kubva gastronomy kusvika kune zvakasikwa nzvimbo, mahombekombe kana tsika dzayo. Tsvaga kuti ndeupi rudzi rwekushanya unogona kufarira kuwana kuSpain, sezvo paine nzira dzakasiyana dzekufamba.
1 Turismo tsika
2 Kushanya kumahombekombe
4 Waini kushanya
5 Kushanya kwezvakatipoteredza
6 Rwendo rwekushanya
7 kushanya kwekumaruwa
8 Kushanya kwechando
Tsika yekushanya yagara iri imwe yeakanyanya kunaka. Mune urwu rudzi rwekushanya isu tinosanganisira iyo yakanangana nekuwanikwa kwenhoroondo, zviyeuchidzo, zvisaririra zvezvokuchera matongo uye mamuseum. MuSpain tinogona kuwana matunhu mazhinji ane nhoroondo yavo uye mamuseum. Iyo Guggenheim muBilbao kana iyo Prado Museum muMadrid ivo mienzaniso mikuru. Zvivakwa zvakare zvakakosha sezvo tichiwana nzvimbo dzakadai seGiralda muSeville, Alhambra kuGranada, Sagrada Familia muBarcelona, ​​Cathedral yeSantiago de Compostela kana iyo yaLeón, Alcázar yeToledo, iyo yeSegovia kana iyo Roman Theatre yeMerida
Isu tinoziva kuti kuSpain chikamu chakakura chekushanya chakatenderedzwa kumahombekombe ayo, nekuti zvakare ine yakanaka kwazvo mamiriro ekunze. Munzvimbo ye Mediterranean tinowana nzvimbo dzakadai seValencia, nzvimbo yeCatalonia uyezve iwo Balearic Islands ane nzvimbo dzevashanyi dzakadai seMallorca kana Ibiza. Kune rimwe divi, kune vanhu vazhinji vanofarira mahombekombe eAndalusia kana vanosarudza kuenda kuCanary Islands, iyo inonakidzwa nemamiriro ekunze akanaka gore rese.
Hapana mubvunzo kuti Spain ndeimwe yenzvimbo dzine yakanakisa gastronomy muEurope uye nekudaro gastronomic yekushanya ndiyo imwe yeakanyanya kunaka. Kuchamhembe kune hove huru uye ndiro dzegungwa. Muchokwadi, iyo Nyika yeBasque, Rioja kana Galicia ndeimwe yenzvimbo dzinodikanwa zvekushanya kwekudya yeiyo yepamusoro mhando yemadhishi ayo uye zvigadzirwa. MuAndalusia tinowana imwe yenzvimbo dzinodiwa dzematepi. Uye zvakare, munzvimbo idzi zvakajairika kuwana mhemberero dzakakumikidzwa kune gastronomy, iyo inokwezvawo vashanyi vazhinji gore rega rega, senge Seafood Festival muO Grove, Galicia.
Kushanya kwewaini rudzi rwekushanya kwakabatana newaini, chimwe chinhu chatinogona kuonawo mumatunhu mazhinji eSpain ayo anozivikanwa newaini yavo. Nzvimbo senge La Rioja, Catalonia, Galicia kana Andalusia Newaini yavo yeJerez vane masangano ekutanga ayo anokwezva mazana emazana evashanyi vanoda kusvika kunzvimbo dzekugadzira kuti vaone wineries neminda yemizambiringa uye vanakirwe neruzivo rwewaini zvizere, mukuwedzera pakuravira kana makosi.
Rudzi urwu rwekushanya nderwazvino kwazvo, sezvo kushanya kwakatenderedzwa kune yakasikwa maonero kwakabuda makore mashoma apfuura. Misa yekushanya inoparadza nzvimbo uye pazviitiko zvakawanda inokonzeresa nzvimbo dzechisikigo kukuvara Ndokusaka new ecological kushanya yakagadzirirwa kusimudzira kuziva uye kuitira kuti vanhu avo vanonakidzwa nehupenyu hwehupenyu vagone kufamba vachichengetawo nharaunda. Mahotera ane zvipenyu uye anowanzo kunakirwa munzvimbo dzechisikigo kwaunogona kunakidzwa nekudzidza kubva kune zvakasikwa usinga kukuvadze.
Yekushanya kwekushanya yakanangana neavo vanhu vanoshingairira uye vanofarira mhando dzese dzemitambo. Munzvimbo dzakaita semhenderekedzo yekuchamhembe kweGungwa reCantabrian kana Andalusian coast, tinowana mahombekombe akakodzera emitambo yakadai sekushambira kana kitesurfing, ine zvikoro zvinoshandiswa kutanga mumutambo. Kune zvakare nzvimbo zhinji muSpain umo maungaita mitambo senge yekukwira mukati nzvimbo dzepanyama, kubva kuGalicia kuenda kuAsturias kana kuCatalonia. Kunyangwe nhasi uno zviri nyore kuwana nzvimbo dzine nzira nyowani dzekukwira kuenda.
Tourism yekumaruwa ndeimwe yakakura mumaruwa uye munzvimbo dzakanyarara, mudzimba dzakanaka dzakagadziridzwa dzimba kuti unakirwe nehupenyu hwakadzikama uhu. Nzvimbo senge Galicia inyanzvi mune urwu rudzi rwekushanya. Kugara mudzimba dzakanaka dzekumaruwa, dzakakomberedzwa nemasikirwo chinhu choumbozha nhasi kutiza chipatapata cheguta.
Iyi ndiyo imwe mhando yekushanya yatinogona kuwana muSpain mumwaka wechando. Nzvimbo dzakadai seArán Valley muLleida, iyo Puerto de Navacerrada muMadrid, Formigal muHuesca kana Sierra Nevada kuGranada ndidzo dzimwe nzvimbo dzinopa nzvimbo dzekushambadzira dzakagadzirwa nemhando dzenzvimbo, pekugara uye kunakirwa kwemhuri yese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Mhando dzekushanya kuSpain
Nudist mahombekombe eAlmería aunofanira kushanyira
El Cañuelo pamhenderekedzo